Rikoooo.com - 737 classic download and installation
Nbudata 737 na nbudata
Mbido akwụkwọ a na-agụghị • 4 posts • Peeji 1 of 1
Jikọtara: 17 Jenụwarị 2017, 23:02
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by jopidioot » 26 Julaị 2018, 11:32
Mgbe nbudata na nwụnye, redstack na-efu. (naanị obere igbe). Enyochara m nzukọ ahụ ma gbalịa aro ndị ahụ, nakwa obere usoro mmezi ahụ e kwuru okwu ya, ma ka na-enweghị ihe ọ bụla. M ibudatara ọzọ na ntinyekwa ya, mana enweghi obi ụtọ. Ụgbọelu ahụ na-arụ ọrụ nke ọma ma ọ nweghị radios.
Ọ gaghị ekwe omume idozi nbudata ahụ, nke mere na ọ na - arụ ọrụ mgbe echichi ahụ?
Kwuru na nke a ma o nweghi azịza / mmeghachi omume.
Olileanya inweta ya ugbu a.
Kasị mma, Ee.
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by rikoooo » 28 Julaị 2018, 18:35
Daalụ maka ozi gị,
M emelitere ngwugwu a biko budata ụdị nke ọhụrụ a add-on, or if you wanna make the correction of the radio by yourself simply remove the file 737-400.dll from the folder "Panel" of the Boeing 737 classic, the radio shack will show up again.
Jikọtara: 05 Dis 2018, 05:52
737 kpochapụwo - okuku P3Dv4
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by ụzọ » 30 Jun 2019, 04:39 kwuru
Firstly nnukwu ekele maka unu maka ọrụ ike na nchịkọta ihe ịtụnanya ị nwere maka P3Dv4. Emere m ka nnukwu mmali ahụ si FSX na P3D na ngwụsị nke afọ gara aga, ma unu bụ ndị otu nnukwu akụkụ nke ojiji m nke FS ọhụrụ.
Enwere m obi uto na ngwugwu gị - Boeing 737 Classic Multi Livery Pack FSX & P3D - na mbido, ihe niile rụrụ ọrụ nke ọma na enweghị nsogbu ọ bụla. Agbanyeghị, maka izu ole na ole gara aga, oge ọ bụla, ebe ị na- P3D, Ana m ebu otu n'ime B737s Classic, P3Dv4 dị na-emechi kpamkpam, ihe dịka elekere 10 mgbe ụgbọelu ahụ eburula ma gosipụta na ihuenyo …………… Ka m ka na-ebudata ụgbọ elu ndị ọzọ na ebe ndorode ụlọ nke ORBX, anaghị m Ghọta ihe agbanweela. Enwetarala m ụdị nke ngwugwu gị emelitere ............. mana enwere nsogbu na ụgbọ elu 737 niile.
Enwere aro ndị ị ga - enyere m aka? Ngbaghara maka ajụjụ dị ogologo oge .......
Mpempe akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ by ụzọ » 06 Julaị 2019, 07:34
4 posts • Peeji 1 of 1